Anaa Haa Nyaatu Yaa TUULAMAA Koo! GOOTUMMAAn Isaa Iddooma Jirti! – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooAnaa Haa Nyaatu Yaa TUULAMAA Koo! GOOTUMMAAn Isaa Iddooma Jirti!
Anaa Haa Nyaatu Yaa TUULAMAA Koo! GOOTUMMAAn Isaa Iddooma Jirti!
Tuulamni Ilmaan Taaddasaa Birruu Gantoota isaa Akka Taayyee Danda’aa Kan Amhaaraa waliin Dhaabbatanii Ergamaniifii lafa isaa dhabsiisan dhabamsiisee HAQA isaa deebifachuu fi DHABAMA irraa hafuuf daran wal ijaaree socho’ee qabsoo gochaa gantoota isaa adabuun fuuncaa diinaa kukkutee bilisoomuu qaba.
Amma illee gantootni TUULAMAA lafa Tuulamaa Qotee bulaa keenya kumaatamaan irraa buqqisiisanii gurgurataa ittiin duroomaa fi XAJJII ittiin dhugaaa jiru. Jarri akka Taayyee Danda’aa Tuulama keessaa dhabamuu qabu!
Oromoon HUNDI waliin dhaabbatee ilmaan TUULAMAA Dhabama irraa baraaruuf qabsoo finiinsuun FALAMMIIN Maay’ii akka lafa Tuulamaa irratti taatu qabsoo finiinsuu qaba!
Keessattuu ilmichi BOORANAA obboleessa TUULAMAA kan ta’e MACCAAn xiiqiin obboleessa isaa Tuulamaan dhabama irraa baraaruuf WALLAGGA irraa Hamma Maccaa Shawwaatti; JIMMA Irraa hamma Ilubbaaborii fi Kaabaa-Dhiha Shawwaatti lola finiinsee TUULAMAAn baraaruun haqa dirqama OBBOLUMMAA qaba!
Gantoota Tuulamaa keessaa bahanii diinaa waliin dhaabbatanii Tuulama buqqisiisaa fi iyyoomsaa jiran irratti Oromoon tarkaanfii fudhachuu qaba!
TUULAMAAn Bilisoomsuun Oromiyaa Bilisoomsuu Dha!
OBBO KAFFALOO NIGAATUUN haa gadhiifami!
OBBO KAFFALOO NIGAATUUN haa gadhiifami! Qeerroo Horroo Guduruu irraa! Waxabajjii 1, 2018 Obboo Kaffaaloon abba…